के यो गुणस्तर डोमेन ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सम्भव छ?
विजेता लिङ्क निर्माण अभियान सिर्जना गर्न, एक वेबसाइट मालिकले यो वेबसाइट अप्टिमाइजेसन प्रक्रिया सम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण विचारहरू थाहा पाउनुपर्छ. यस लेखमा, हामी छलफल गर्ने सन्दर्भमा कसरी छलफल गर्नेछौं, र डोमेन ब्याकलिङ्कहरू र तिनीहरू मध्ये कुनले तपाईंको वेबसाइट अनुकूलन योगदान गर्न सक्दछ।.
सबै भन्दा पहिले, हामीलाई यी दुई लिङ्क निर्माण सर्तहरूको बारे थप विवरण बोल्ने अनुमति दिईयो - डोमेन र ब्याकलिंक सन्दर्भ गर्दै.
सामान्यतया, डोमेन एक अद्वितीय कम्पनी यूआरएल भित्र सूचीबद्ध वर्णनकर्ता हो. उदाहरणको लागि, URL मा "http: // www. semalt. com, "शब्द" सेमेल्ट "को एक विशेष अनुकूलन कम्पनी को एक डोमेन नाम को रूप मा कार्य गर्दछ र यस संगठन को एक ब्रान्ड नाम संग संगत गर्दछ.
डोमेन को संदर्भित गर्दै डोमेन को संदर्भ मा संदर्भित छ कि बैकलिंक देखि आ रहे हो.
र अन्तमा, एक ब्याकलिङ्क अर्को वेबसाइटमा एक लिङ्क हो जुन तपाईंको वेब स्रोतमा उल्लेख गर्दछ.
यसैले, सन्दर्भ डोमेन हो जहाँ तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू आउँदै छन्, र ब्याकलिङ्कहरू वेबसाइटहरूको लिङ्क हुन् जुन तपाईंको साइटमा फिर्ता लिङ्क हुन्छ।.
के डोमेन र ब्याकलिङ्कलाई सन्दर्भको बीचको अंतर जान्न आवश्यक छ?
एक Semalt विश्लेषक उपकरण को प्रयोग गरेर एक सरल वेबसाइट अनुसन्धान को संचालन गरेर, तपाईं आफ्नो वेब पृष्ठ संग डोमेन र बैकलिंक को संदर्भित कथन को लागी देख सकते हो. तपाईंले खोज्नु भएको जानकारी सन्दर्भ सन्दर्भ र ब्याकलिङ्कहरू बीचको अनुपात हो. उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग तपाइँको साइट र केहि उल्लेख गरिएका डोमेन डोमेनहरूमा उल्लेखनीय ब्याकलिङ्कहरू छन् भने, यसले तपाईंको लिंक बिल्डिंग रणनीति कमजोर छ भनेर देखाउँछ र केहि सुधारहरूको आवश्यकता छ।. यसबाहेक, Google ले यस अनुपातलाई सम्भावित गतिविधिहरूको साथमा सम्भव पार्न सक्दछ जुन तपाईँले धेरै पछाडि पछाडि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. परिणाममा, यसले तपाईंको वेब पेज रैंकिंगलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ. खोज इन्जिनहरूले उच्च ब्याकलिंकहरू र कम सन्दर्भ डोमेनहरूलाई दण्ड दिन्छन् किनभने यो भुक्तानी लिङ्क योजना (निजी ब्लग सञ्जाल) को चिन्ह हो।.
राम्रो ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंको वेबसाइट अनुसन्धानले तपाईंको बाह्य लिङ्कसँग स्पष्ट समस्या छ भने, त्यसपछि तपाईंले डोमेन ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्न सुरु गर्नुपर्छ।. तपाईंको संभावित पाठकहरूका लागि बहुमूल्य हुन सक्छ तपाईंको वेबसाइटको लागि अनौठो गुणस्तरको सामग्री क्रिभ गर्ने शुरू गर्नुहोस्. त्यसो गरेर, तपाईले कार्बनिक लिङ्क रस प्राप्त गर्नुहुनेछ किनभने प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको लागि एक-अर्काको सामग्रीको गुणस्तर साझा गर्न सक्नेछन्. यसबाहेक, तपाइँ आफ्नो ब्याकलिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ फेला पार्नका लागि आफ्नो बजार आला अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुहोस्. वेबसाईट मालिकहरू वा ब्लगरहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् जुन सामग्री तपाईंको लागि गुणस्तर देखिन्छ र उनीहरूको लिङ्क निर्माण अभियानमा योगदान दिन चाहन्छन्. तिनीहरू केहि गर्नका निम्ति यो गर्दैनन्. यही कारणले तपाइँ तिनीहरूलाई केही लाभकारी प्रस्तावहरू वा भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्दछ.
यसबाहेक, तपाईंले ब्लग पोस्टिंग प्रयोग गरेर गुणवत्ता ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईंको व्यवसायलाई सामान्य जनतालाई प्रस्तुत गर्न उत्कृष्ट अवसर हो. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूको अभिमुखी ब्लगहरूका लागि गुणस्तर र संलग्न सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्. तपाईंको पाठहरू विज्ञापनको जस्तो आवाजको रूपमा लिनु हुँदैन र साथसाथै ब्याकलिङ्कहरूले यसलाई प्राकृतिक रूपमा हेर्नुपर्छ Source .